Fanasokajiana ny Keyboard - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Fandefasana keyboard LCL any Etazonia
Ny sehatra lozisialy iraisam-pirenena an'ny orinasa logistika YiXing Global dia nankinin'i Ms Lin avy amin'ny Gogate Technology Co.Ltd. Fantatra fa mazàna i Ms.Lin dia manao raharaham-pamokarana vokatra elektronika, saingy sambany izy no nanana fotoana niarahana niasa tamin'ny mpividy amerikana hanondrana azy, noho izany dia mila mitady sehatra logistika amerikana miampita sisintany izy efa nanao raharaham-barotra fanondranana nandritra ny fotoana ela.
Ny làlan'ny ranomasin'i Etazonia
Nianatra momba ny sehatra YiXing Global Logistics tamin'ny alàlan'ny internet i Ms.Lin ary nifandray tamin'i Peggy izy. Ny sehatra logistika YXL dia manararaotra ity fotoana ity hilazana aminao ny momba ireo vokatra elektronika aondrana any Etazonia amin'ny ranomasina. Rehefa avy nifandray tamin'i Ms.Lin i Peggy dia nahalala fa mila mandefa andiany fitendry any Etazonia i Ms.Lin, ary namboarina manokana ny drafi-pitaterana roa hanondranan'izy ireo any Etazonia.
Ny fonosana voalohany: fanondranana amin'ny rivotra. Hanidina mivantana avy any Shenzhen mankany Etazonia izy, ary ny sehatra logistika YiXing Global no tompon'andraikitra amin'ny fandaminana ny fandefasana any amin'ny toeran'ny mpividy aorian'ny fahavitan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny Fadintseranana any Etazonia. Ny tombony amin'ity paikady ity dia ny hafainganan'ny fitaterana haingana, fa ny fotoana fitantanana dia betsaka kokoa, izay mety hiteraka fahasimbana amin'ny fonosana ivelany amin'ny klavier.
Ny drafitra faharoa: ny fitaterana an-dranomasina Peggy avy amin'ny sehatra Logistics global YXL dia nanazava tamin'i Ms.Lin tamin'ny antsipirihany ny fepetra takiana sy ny dingana amin'ny andiana teboka asa fitaterana, toy ny toerana famandrihana, famonosana, fanadiovana ny fadin-tseranana, ny fahazoan-dàlana amin'ny seranan-tsambo any amin'ny seranana sy fandefasana . Tena afa-po Ramatoa Lin ary nanapa-kevitra ny hifidy ny tsipika manokana amerikana amin'ny fitaterana ranomasina. Ny tombony an'ity tetik'asa ity dia ny fiarovana sy ny fahamendrehana, ny fitehirizana vola ary ny fotoana fohy. Ny fatiantoka dia lava kokoa ny fotoana fitaterana noho ny entana amin'ny rivotra.
Ho an'ny entana fanondranana Ms.Lin, ny asan'ny fanambarana eo an-toerana any Shenzhen dia nataon'i Porsche express sehatra lozisialy iraisam-pirenena momba ny lozisialy sy ny fandaminana, rehefa avy nampiaiky volana an'i Ms.Lin ny asa dia mety haneho sehatra iraisam-pirenena, fanangonana matihanina ary fanomanana antontan-taratasy mifandraika amin'izany. hiantohana ny famandrihana fandefasana entana, fanambaràn'ny ladoany, fitaterana any ivelany.
Mety haneho sehatra logistik iraisampirenena ho an'ny masoivoho vahiny ho an'i Ms.Lin amin'ny fiheverana ny entana aondrana natao fanomanana ampy, noho izany any amin'ny firenena vahiny dia tsy noho ny tsy fahampian'ny antontan-taratasy na ny famafana ny entana dia tsy mifanaraka amin'ny olana toy ny sakantsakana, mahafeno tanteraka ny fepetra takian'ny keyboard fitaterana, ny fahazoan-dàlana ary ny fadin-tseranana ary ny fahazoan-dàlana aorian'ny fividianana ny toerana voalohany toerana misy an'i Ms.Lin mpividy.
Ny mpanjifa vahiny Ms.Lin dia tena afa-po amin'ity fiaraha-miasa voalohany ity sy ny fahatongavan'ny entana, noho izany dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'i Ms.Lin izy ireo ary maneho ny fankasitrahany ny sehatra logistika manerantany YXL noho izany.